Teregiramu inotangisa yekuvandudza yakanangana ne3D Kubata | IPhone nhau
Pasina mubvunzo kutaura, vazhinji venyu havasi kuzobvumirana neni zvachose, asi kana tikaisa mukurumbira uye tsika padivi, tinofanirwa kutaura kuti Teregiramu ndiyo yakanyanya kunaka meseji mutengi pamusika. Uye isu hatingotaure padanho reIOS chete, asi pamapuratifomu ese, Teregiramu iripo chero kwatinoenda pasina zvirambidzo, ichishanda pamwe chete nezvinoitwa pane chero chinhu. Iyo yazvino Teregiramu yekuvandudza inotiunzira isu nyaya dzinonakidza, haimiri pakurwira kwayo kuti ive inonyanya kufarirwa mameseji mutengi, nekuti mumutambo wemhando yakatove kupfuura kukunda.
Ichokwadi kuti Mwedzi uno wapera Teregiramu yakave neakateedzana ehurongwa hwekurovera kwatisingafarire zvachose, zvisinei, hazvireve kuti ndicho chishandiso chakanakisa nekure. Iye zvino isu tinowana yakateedzana ye3D Kubata mabasa evashandisi veiyo iPhone 6s mune chero ayo mavhezheni ekutevera kutora mukana wehunyanzvi hunotakurwa neApple nemureza, pamwe zvangoerekana zvave iko kunyorera kuti kuita kwakawanda kunounza iyo 3D Kubata.
Chii Chitsva muVhezheni 3.8.1
ZVINOKOSHA KAMERA KUWANIKWA
- Dhinda uye bata bhatani bhatani kuti utange ipapo kamera uye tora pikicha kana vhidhiyo.
- Dhinda uye bata bata 'tora pikicha' mune yakajairwa kamera modhi kuti utore vhidhiyo. Regedza kuti rimise kurekodha.
- Mavhidhiyo akagadzirwa mukati mekushandisa anozonyorwa parunhare nehuhu HD hwakazara.
Dzimwe sarudzo dze 3D Kubata:
- Ongorora mafoto nemavhidhiyo kwese kwese, kusanganisira menyu yekubatanidza, nhoroondo yemessage uye Multimedia.
- Ongorora mapikicha maficha mumachats, pasina kuenda kunotaura ruzivo.
- Ongorora zvisungo mu 'Shared Links' chikamu.
- Yakawedzera Uber uye Citymapper kuti uwane nzira.
- Kugadziriswa kwezvikanganiso paunovhura mafaera mune mamwe mashandisirwo uye shanduko yenhamba.
- Zvimwe zvakawanda zvekuvandudzwa kudiki.
Iye zvino tava kukwanisa kuwana iyo kamera kubva kuTeregiramu icon kuti titumire pikicha uye vhidhiyo nekukurumidza sezvazvinogona. Kurumidza uye nyore kugovana mupfupi. Kune rimwe divi, kuongororwa kwemifananidzo kwasvikawo mukati me 3D Kubata kwekushandisa, sezvinoita Instagram semuenzaniso. Beyond 3D Kubata, Teregiramu yakapetana naUber uye Citymapperpamwe nekugadzirisa chaiko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Teregiramu inotangisa yekuvandudza yakanangana ne3D Kubata
Zvakanaka, ndinotenda kuti ndiyo yakanakisa mameseji application. Zvinonzwisa tsitsi kuti hapana kana vanhu vakawandisa vanofunga nezvazvo vosiya WhatsApp yapera.
WhatsApp ndiyo yakatanga kusvika uye iyo yakazvipa inoyevedza mushandisi base asi ndizvo zvazviri, ndicho chinhu chete chinoita kuti ive nani pane chimwe chinhu.
Pindura kuna John_JD_Doe
Steve - Iyo Jumping Dinosaur, yekuzivisa nzvimbo mutambo